မင်္ဂလာသက်တမ်းတစ်လပြည့်မှာ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့အိမ့်ချစ် - Cele Gabar
မင်္ဂလာသက်တမ်းတစ်လပြည့်မှာ ကြည်နူးစရာပုံရိပ်လေးတွေကို မျှဝေလာတဲ့အိမ့်ချစ်
အိမ့်ချစ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို အရည်အချင်းရှိတဲ့ အနုပညာမျိုးဆက်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အချစ်သီချင်းကောင်းများစွာကို ပရိသတ်တွေကိုဖန်တီးသီဆိုပေးထားတာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တွေကိုရရှိထားသူပါ။
အိမ့်ချစ်ကတော့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး မပြောပြပေမဲ့ လက်ထပ်ခွင့်တောင်းခံရတဲ့သတင်းကို ပရိသတ်ကိုရုတ်တရက်ကြီးအသိပေးလာခဲ့ပြီး မကြာသေးခင်ကမှ ပူပူနွေးနွေးလက်ထပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆိုရင်မင်္ဂလာသက်တမ်းတစ်လပြည့်သွားတဲ့နေ့မှာ အမှတ်တရအနေနဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေတင်ပေးခဲ့ပြီး “Its beenamonth …. သူစိမ်းနှစ်ယောက်ပေါင်းဖက်မှုမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာမပြောနဲ့ တစ်လတောင်မလွယ်ကူပါဘူး…ဒါပေမယ့်လဲ မတူညီမှုတွေကို ညှိုနှိုင်းပြီး ကိုယ်ချင်းစာတရားကို အခြေခံလို့နားလည်မှုတွေချစ်ခြင်းမေတ္တာတွေခွင့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ ရှေ့ဆက်ကြရင်း နေ့ရက်သစ်ပေါင်းများစွာဆီသို့ …. Eric & Emily” ဆိုပြီးတော့ ဖေ့ဘွတ်ခ်မှာ ရေးသားထားတာပါ။
အခုဆိုရင်တော့ အိမ့်ချစ်ကချစ်ရသူနဲ့ရွှေလက်တွဲသွားပြီဖြစ်သလို ပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်ဆုံရမယ့်ရှိုးပွဲတွေကိုလည်း ကျင်းပချင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက် အနုပညာဖန်တီးမှုတွေကိုလုပ်နေတဲ့အိမ့်ချစ်ကတော့ အွန်လိုင်းကနေပြီးတော့လည်း ပရိသတ်တွေနားဆက်ခံစားနိုင်ဖို့လည်းအမျိုးမျိုးတင်ဆက်နေတာပါ။ မင်္ဂလာသက်တမ်း(၁)လမှစပြီး အသက်ထက်ဆုံးချစ်ရသူနဲ့ သာယာချမ်းမြေ့တဲ့ဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်ပါစေ အိမ့်ချစ်ရေ…
Posted in Cele NewsTagged Cele, Cele Gabar, Cele Myanmar, Celebrities, Celebrities Myanmar, Celebrity, Celebrity Myanmar, Eint Chit, Myanmar Celebrities, Myanmar Celebrity, ဆယ်လီ, ဆယ်လီမြန်မာ, မြန်မာဆယ်လီ
Previous post JOOX ရဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာတွေမှာ (၄)ပတ်မြောက်အထိရှိနေတဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်းရဲ့ သီချင်းအသစ်
Next post မီးဖိုချောင်စရိတ်သက်သာဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးမျှဝေလိုက်တဲ့ နေမျိုးအောင်ရဲ့ဇနီး